HypeAuditor: Stack Marketing Influencer gị maka Instagram, YouTube, TikTok, ma ọ bụ Twitch | Martech Zone
N'ime afọ ole na ole gara aga, agbagogoro m mkpakọrịta na ndị na -emetụta ahịa. M na -ahọrọ nke ọma n'ịrụ ọrụ na ụdị - na -ahụ na aha ọma m wuru agaghị emerụ mgbe m na -atụ anya atụmanya na otu m ga -esi nwee ike inye aka. Ndị na -emetụta ihe na -enwe mmetụta naanị n'ihi na ha nwere ndị na -ege ntị tụkwasịrị obi, na -ege ntị ma na -eme akụkọ ma ọ bụ ndụmọdụ ha na -ekerịta. Bido ire ere ma ị ga -atụkwasị ntụkwasị obi nke ndị na -ege gị ntị. Tụfuo ntụkwasị obi ha na ị bụghịzi onye na -emetụta ihe!
Mgbe a jụrụ ihe ndị na -eme ihe nkiri ga -achọ ịhụ n'ọkwa sitere n'ụdị:
59% nke ndị na -eme ihe nkiri kwuru na ọ ga -amasị ha ịhụ echiche doro anya gbasara mmefu ego dịnụ na mbubata
61% nke ndị na -eme ihe nkiri chọrọ nkọwa doro anya nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ka akpọsa
Ihe karịrị ọkara (51%) jụrụ maka ozi gbasara ụlọ ọrụ ha ga -ahazi
M na -akwanyekarị ụlọ ọrụ ndị m na -arụ ọrụ maka njikọ nsuso ma na -emepekarị ule na -anaghị efu ha ihe ọ bụla ọ gwụla ma ọ na -ezo aka na ego ha nwetara n'ezie. N'ụzọ ahụ ụlọ ọrụ ndị mụ na ha na -arụ ọrụ anaghị adị m ka m na -ewepụ ha ma ọ bụrụ na mkpọsa ahụ emezughị ihe ha tụrụ anya ya. N'otu aka ahụ, ọ naghị ewute ha na ha na -egbucha m akwụkwọ ndenye ego ma ọ bụrụ na ebugharị m onye ahịa ọhụrụ n'ụzọ ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe dabara n'etiti ndị na -ege ntị, azụmaahịa, na mụ onwe m nwere ngosi zuru oke n'ụzọ… mmekọrịta a na -ama ifuru.
Nke ahụ kwuru, otu mkpọsa anaghị akpagharị agịga. Ihe ịga nke ọma m nwere bụ ụlọ ọrụ ndị rapaara m n'ahụ ruo otu afọ ma ọ bụ karịa ebe m na -enye ha isi ugboro ugboro ma ọ bụ nlebara anya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ụdị ndị mụ na ha na -arụ ọrụ na -eji nnukwu ahịa ahịa influencer maka nyochaa ọganihu nke mmekọrịta anyị.
HypeAuditor na -enyere ụlọ ọrụ, ụdị, na ikpo okwu aka melite arụmọrụ mkpọsa ahịa mmetụta ha
HypeAuditor: Stack Marketing Influencer gị
HypeAuditor na-egwu ihe karịrị nde mmadụ 23 na-emetụta ya, nwere ihe karịrị 35 metrik maka nyocha, yana sistemụ nchọpụta aghụghọ kacha mma na-eji AI. Ha na -enyocha Instagram, YouTube, TikTok, na Twitch ma na -enye data na nghọta maka ịga nke ọma n'ịzụ ahịa influencer. Site na HypeAuditor, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịnweta ngwaọrụ ndị a:
Chọpụta ihe dabara adaba na Instagram, YouTube na TikTok na-emetụta profaịlụ 12M+ site na iji usoro nzacha ga-enyere aka mezie ndepụta ahụ na profaịlụ dị elu.
Ihe karịrị usoro ihe omimi 35 iji nyochaa Instagram, YouTube, TikTok & Twitch influencers. Ọnọdụ ndị na-ege ntị, nkewa nke nwoke na nwanyị, izi ezi & mmeghachi omume, ịdị mma nke ndị na-ege ntị.
Jikwaa ma mezie mkpọsa gị na ọkwa ọ bụla site na ndepụta ndị na -emetụta ya na akụkọ mgbasa ozi ikpeazụ. Nyochaa ịdị irè mkpọsa gị ma mee mgbanwe ndị dị mkpa.
Nyochaa mpaghara asọmpi ma tụọ arụmọrụ ahịa ndị na -emegide gị. Tụlee ọtụtụ ụdị n'otu akụkụ wee chọpụta ndị na -egwu egwuregwu kacha elu n'otu mba na niche.
HypeAuditor ewepụtala teknụzụ ọhụrụ na -eme ka ụlọ ọrụ na -ere ahịa influencer bụrụ nke ziri ezi na n'ụzọ doro anya. Ebumnuche HypeAuditor bụ inyere ndị na-ere ahịa aka ịmepụta mgbasa ozi ịre ahịa mmetụta pụrụ iche ma dị irè site na iji usoro data.
Bido na HypeAuditor n'efu
Ngosipụta: Ana m eji nke m Mgbakwunye HypeAuditor njikọ na akụkọ a.
Tags: chọta ndị na-eme ihechọta ndị na -emetụta instagramchọta ndị na -eme TikTokchọta twitch influencerschọta ndị na -emetụta YouTubenchọpụta aghụghọmmetụta aghụghọahịa ahịandị na - eme ihe nkirindị na-eme ihe nkirindị na -eme mkpọtụndị na-emetụta youtube